नीति शाहले ठीक भनिन्–'मेरी आमा अनपढ र पाखे नै हुन्' - Himalayan Kangaroo
नीति शाहले ठीक भनिन्–’मेरी आमा अनपढ र पाखे नै हुन्’
Posted by Himalayan Kangaroo | २ मंसिर २०७४, शनिबार ०३:५६ |
‘मलाई त कुनै पनि घरको काम गर्न आउँदैन ।’ भनेर आफू आधुनिक भएको, सार्वजनिक गाडीमा ठूलो ठूलो स्वरमा अंग्रेजी भाषामा कुरा गरेर आफू शिक्षित भएको प्रमाणित गर्ने र लोक गीत सुन्नेलाई पाखे भनिने, हाम्रो र हामी पछिको पुस्तामा नीति शाहले ’मिस इन्टरनेशनल’ मा दिएको अभिव्यक्ति सामान्य हो । जसले नेपाल राम्ररी देखेकी नै छैनन् , बुझेकी नै छैनन्, जसको संसार शहर केन्द्रित छिन्,उनले सिंगो नेपालको परिचय कसरी दिउन् ?
काठमाडौं देखि धेरै टाढाको गाउँमा हुर्किएकी म, मेरी आमाको कारणले नै यसरी बोल्न सक्ने बनेको छु । मेरी आमा, जो पाँच कक्षा मात्र पास हुनुहुन्छ, उहाँको विचार मेरो भन्दा कैयौं प्रगतिशील छ । चार छोराछोरीलाई एक्लै हुर्काउने जिम्मेवारी मेरी आमाले उठाउनुभयो । उहाँलाई अंग्रेजीका आधारभूत शब्द बाहेक केही थाहा छैन,तर उहाँ देशको राजनीतिमा चासो राख्नुहुन्छ । उहाँले आफूले महिनावारी हुँदा अनेक दुः ख सहनुभयो, तर हामीलाई महिनावारी बार्नु आवश्यक छैन भन्नुहुन्छ । मेरी आमा जसले जीवनभर साडी लगाएर बाँच्दै हुनुहुन्छ, तर छोरी–बुहारीलाई आफ्नो रोजाइको कपडा लगाउन स्वतन्त्र छोडिदिनुहुन्छ । आमाको सात वर्षको उमेरमा विवाह भएको थियो, तर उहाँले हामीलाई ’तिमीहरुको जीवनसाथी तिमीहरु आफैले रोज्नुपर्छ र आफू करियरमा सक्षम भएपछि, आफ्नो चाहना अनुरुप विवाह गर्नुपर्छ ’ भनेर उत्प्रेरणा दिनुहुन्छ । अब उहाँलाई अशिक्षित भन्ने आधार त्यही ’स्कूलले शिक्षा नभएको’ हो त ? हामीले शिक्षित र अशिक्षितको अर्थलाई केवल किताबी ज्ञानको प्रमाणपत्रमा समेटिदिएका छौं ।
शहरका हामी मानिसहरु व्यक्तिगत सरसफाईलाई बढी समय दिन्छौं, हाम्रो श्रृंगारपटारमा बढी समय लगाउँछौं । तर गाउँका महिलाहरु, खेतबारी, घाँस दाउरा, गोबर माटो, बच्चाको स्याहारसुसार आदिमा व्यस्त हुन्छन् । शहरी शिक्षित मानिसहरुले आफ्नो घरअगाडि फ्यात्त फोहोर फाल्दै गर्दा, उता गाउँका महिलाहरुले घरदेखि आँगन र बाटोसम्म रातो माटो र गोबरले लरक्क पोत्दै वरिपरि चिटिक्क पार्न कहिल्यै अल्छी मान्दैनन् । यी सबै काम सक्दा उनीहरुले आफ्नो श्रृंगारपटार त के, आफूले राम्रोसंग खाना खान पनि भ्याउँदैनन् ।
ग्रामिण महिलाहरु अशिक्षित र फोहोरी छैनन् । बरु उनीहरुले आफ्नो व्यक्तिगत विकासको लागि अवसर पाएका छैनन् । ती ग्रामिण महिला मध्ये जतिले अवसर पाएका छन्, उनीहरुले आफूलाई दह्रो प्रमाणित गरेका छन् । त्यसैले त देख्न सकिन्छ, घाँसको भारी गोठमा फालेर, ९ बजे स्कूलको लागि तयार हुने शिक्षिकाहरु, अहिले चुनावको माहोलमा हातमा झण्डा लिएर आफ्नो समर्थक पार्टीकोलागि भोट माग्दै हिंडेका महिलाहरु,आमा समूह मार्फत एकीकृत बनेर गाउँको विकासको लागि कदम चालिरहेका ग्रामिण आमाहरु । शहरमा मोटरबाइक हुइक्याउदा समेत पछाडि फर्केर हेरिने समयमा, गाउँको कच्ची बाटोमा मोटरबाइक हुइक्याइरहेका प्रगतिशील महिलाहरु ।
शहरमा अवसर हुँदा हुँदै खुम्चिन र बाँधिन बाध्य महिलाहरु जस्तै गाउँका महिलाहरुको पनि त्यही अवस्था छ । नीति शाहले भने जस्तै, उनीहरुलाई शिक्षाको अवसर दिन सके उनीहरुले आफ्नो क्षमतालाई बाहिर ल्याउन सक्छन्, आफूलाई अझ अगाडि बढाउन सक्छन् । अझ पिछडिएका गाउँ छन्, जहाँका महिलाले दर्दनाक अवस्था सहनुपरिरहेको छ । त्यसो त शहरकै महिलालाई पनि अवसरबाट बन्चित गरिएको छ । उदाहरण अहिलेकै निर्वाचनको उम्मेद्वारी काफी छ । तर, त्यसको लागि नीतिको जस्तो सोंच र नीतिले झन् असर गर्छ । नेपालको परिचय दिन पाउने, नेपाललाई संसारमा चिनाउन सकिने ठाउंमा उनले दिएको यो हलुका अभिव्यक्तिले महिलाहरुको कुटनीतिक क्षमतामा प्रश्न चिन्ह खडा गर्छ । सुन्दरतालाई नै महिलाको मूल्यांकनको आधार मान्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिन्छ । त्यो सुन्दरता, लवाइ र क्याटवकमा मात्र ध्यान दिनुको साटो नीति र नेपालका आयोजकले उनको बौद्धिक क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिएको भए ?
अन्त्यमा, नीतिको जवाफ उनको घमण्ड भन्दा पनि सतही विश्लेषण हो । सभ्य सहरमा ठूलो स्कूल (उनको भाषामा) पढेकी उनले किताबहरुमा नेपालको गरिबी तथ्याङ्क, ग्रामिण महिलाको दयनीय अवस्था, विभिन्न रोग आदिको बारेमा रटिन् । जसरी परीक्षामा उनले ती प्रश्नहरुको उत्तर लेख्थिन्,त्यसरी नै भाषण ठोकिन् । अब आउने पुस्ताको शिक्षामा पनि यही रट्नेवाला शिक्षा आयो भने, नीति भन्दा पनि उनीहरु धेरै शिक्षित बन्नेछन् र उनले भन्दा पनि धेरै भाषण ठोक्न सक्षम बन्नेछन् । त्यसैले, विद्यालयको शिक्षामा नेपालको परिचय साधारण तथ्याङ्क र किताबका पानाहरुमा मात्र सीमित गरिनु हुँदैन । उनीहरुलाई देशको इतिहास, सभ्यता, संस्कृति र गाउँले परिवेशको बारेमा गहिरो ज्ञान र अवलोकन तथा अनुभवको अवसर दिनु आवश्यक छ ।
Previousउम्मेदवारमाथि आक्रमण शृङ्खला बढ्दो !
Nextअभिनेता कादर खान : रसिलो विगत,निरस वर्तमान
अष्ट्रेलिया आउनुअघि प्रष्ट हुनपर्ने चार कुराहरु
१५ आश्विन २०७५, सोमबार ०१:५४
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको सम्वोधनको पूर्ण पाठ (नेपाली अनुवाद)
२६ आश्विन २०७६, आईतवार ०३:१३
अष्ट्रेलिया सरकारको निशानामा अब ‘शरणार्थी’
७ जेष्ठ २०७४, आईतवार ०३:५७
१ श्रावण २०७७, बिहीबार ०५:४४